Nei Uchisarudza US?
Mutengo wemachira mbishi zvigadzirwa wawedzera munzira yese, ko zvakadii pamusika pasi pechawedzera ketani?
Kubva hafu yechipiri yegore rapfuura, yakakanganiswa nezvinhu zvakaita sekuderedzwa kwesimba uye hukama hwakasimba pasirese, mutengo wezvinhu zvakagadzirwa wakakwira. Mushure megore idzva reChinese, "kuwedzera kwemitengo" kwakawedzera zvekare, nekuwedzera kweanopfuura makumi mashanu muzana… kubva kumusoro "...
VANHU VANE ZVAKAWANDA Sarudzo YEMAI MUZhizha?
Vanhu vanonakidzwa nekupfeka A tii yekurovedza muviri, iri jira rejira rehembe rakatumidzwa mushure meT chimiro chemuviri wayo nemaoko. Pachivanhu, ine maoko mapfupi uye yakakomberedza neckline, inozivikanwa sevashandi vehuro, iyo isina collar. T-shirts kazhinji inogadzirwa neyeyakatambanudzwa, yakajeka uye isingadhuri machira uye zviri nyore t ...
Maitiro ekufananidza hoodi pasina kuita zvevacheche uye zvine mutsindo?
Zvinonzi majuzi ane "matatu zvisineyi" Zvisinei nezera Zvisinei Varume nevakadzi, vadiki nevakuru Zvisinei nemanyorerwo Kureva, Sweaters inogona kugutsa munhu wese-zuva nezuva-kupfeka, Unogona kuzvichengeta zviri nyore uye zvakaderera-kiyi, Kana unogona kuzviita zvine mutsindo uye fashoni; Kana retro, ar ...
Maitiro uye maficha eSweatshirts fashoni ye2020-2021！
Isu tinopfeka juzi rezuva nezuva. Pfungwa nyowani dzekupfeka masweatshirt… Kazhinji vakadzi vanokwezvwa nemhando dzinoshanda uye dzakasiyana siyana dzehembe dzinogona kusanganiswa nezvimwe zvinhu zvakawanda mumwaka wakapihwa. Ichi chikamu chinosanganisira masweatshirt evakadzi uye hoodi, mafoto ayo ari foun ...
Inopisa muviri wako! Germany yakagadzira hoodie nhema yesainzi uye tekinoroji iyo inogona panzvimbo yeUS $ 200 mbatya dzemari!
Mukutanga kwematsutso uye nguva yechando yapera, zvine mutsindo kuti vanhu vapfeke imwe-yekupfeka panzvimbo yejuzi rine dehwe, iro risingareme kana kukura, asi rinogona kuunza kudziya nekusununguka. Haina bvudzi rakasununguka uye rinodhonza mushure mekugeza, unogona kupfeka newawo machisi uye wobuda usina kufunga zvakawanda. ...
Iko kwemaitiro e2021 sweatshirt uye hoodi ari pano？
Vanhu vanofarira kupfeka hoodies uye sweatshirt. Vamwe vanonzwa kufara nepfupi pfupi, Vamwe vanoda zororo xxxl uye masitaera akareba uye vanozivikanwa kwazvo mumusika. Kusungirirwa hoodi shoma muwadhiropu yedu kunechinhu chakakura panzira yedu yekupfeka uye maitiro. Zvino, DUFIEST ichafumura iyo ...
Indasitiri yezvipfeko iri kuchinja zvakanyanya. Unozviziva here?
Pasina mubvunzo, iri rakaomesesa makore gumi indasitiri yehembe mumakore gumi apfuura, yekutanga yekutanga tsika yekutengesa magetsi bhizinesi hupenyu hweganda, kusvika mumakore achangopfuura, vashoma chete vakapararira mukati mekambani indasitiri yehembe yekutengesa kukura, 90% emakambani vari kuderera, Bu ...
Yakareruka uye yakasarudzika graphic - yevarume maitiro maitiro
Tsamba Dzokukurudzira ndeimwe yemhando dzakasiyana dzemapatani, chirevo chipfupi, chiratidzo LOGO, mubatanidzwa wemifananidzo uye zvinyorwa; Dhizaini yeava vane chibvumirano mumwe munhu kazhinji ane chirevo chakanyanya kunongedza, shanda pane dhizaini simuka "chinyoreso chinonongedza mboni yeziso"
Iyo ramangwana rezvitina-uye-dhaka zvipfeko zvitoro? Aya mana maitiro, achachinja rako rezvipfeko chitoro!
Ndeupi muenzaniso wekupedzisira wevatengesi? Iyo yemari yemari uye yemhando yemubhadharo yevatengesi haina kuchinja kubva paRevolution Revolution. Kana zvitoro zvepanyama zvikararama, zvinofanirwa kutsanangurwa uye chinangwa chekupedzisira chezvitoro zvinova zvakasiyana. 1, Chinangwa chemuviri r ...
Iyi hoodie inogadzirwa kubva pomegranate peels uye yakazara biodegrades？
Yekukurumidza fashoni inzira yakanaka yekuyedza mafambiro akaita vinyl bhurukwa, michero yepamusoro, kana iwo madiki 'magirazi emakumi mapfumbamwe. Asi kusiyana nemafashoni azvino, izvo zvipfeko uye zvishongedzo zvinotora makumi emakore kana mazana emakore kuora. Hwemapfekero evarume vekupfeka brand Vollebak yabuda nehoodie yakanyatso compos ...
Yakagadzikana sei inodzokororwa polyester?
Inenge hafu yezvipfeko zvepasirese zvakagadzirwa nepolyester uye Greenpeace kufungidzira huwandu uhu hunosvika huviri kusvika muna2030. Nei? Iyo mitambo yemitambo kana imwe yezvikonzero zvikonzero zviri shure kwayo: huwandu huri kuwedzera hwevatengi vari kutsvaga machira anotambanudza, asingagadzike. Dambudziko nderekuti, polyester ndeye ...
Chii chinonzi mvura-inogadzirwa inki?
Chii chinonzi mvura-inogadzirwa inki? Kuburitsa inki haioneke zvachose kusvika yasangana nehunyoro kubva mumvura kana ziya. Dzimwe nguva, magadzirirwo anodhindwa neinki yemvura inoonekwa anongoonekwa kana jira ranyorova. Kana jasi rikaoma, dhizaini yako ikanyangarika, yakagadzirira kutanga iyo bhiza ...
Taura nesu ne Skype